क्योटो प्रीफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
मियामा। क्योटो प्रान्त, जापान = एडोब स्टक
त्यहाँ मियामा जस्ता राम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् र क्योटो प्रान्तमा Ine जस्तै अनौंठा माछा मार्ने गाउँहरू। क्योटोको कुरा गर्दा क्योटो शहर, यस प्रान्तको केन्द्र, प्रख्यात छ, तर किन यसको वरिपरि अचम्मका क्षेत्रहरूमा जाने छैन?
क्योटो प्रान्तको रूपरेखा
क्योटो प्रान्तको नक्शा
क्योटो उत्तर र दक्षिणमा लामो प्रान्त हो। उत्तर जापानको समुद्री किनारमा पर्छ र हिउँद हिउँदमा पर्दछ।
क्योटो प्रान्तको दक्षिणी भागमा, पुरानो परम्परागत शहरहरू जस्तै क्योटो सिटी र उजी शहरहरू छन्। अर्कोतर्फ, क्योटो प्रान्तको मध्य र उत्तरी भागमा विभिन्न परम्परागत बस्तीहरू छन्। यी मध्ये, त्यहाँ पर्यटक आकर्षणहरु जुन पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ।
ती गाउँहरूमा जान समय लाग्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईंले बस्तीहरू भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईंले क्योटो शहरभन्दा फरक अद्भुत संसार फेला पार्नुहुनेछ।
मियामामा तपाईं शान्त जापानी ग्रामीण परिदृश्य = AdobeStock अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ
मियामा कायबुकिनोसोटो क्योटो जापान, शीतकालीन = शटरस्टक
मियामा क्योटो प्रान्तको मध्य भागमा अवस्थित सुन्दर ग्रामीण गाउँ हो। त्यहाँ लगभग २ 250० जापानी शैलीका घरहरू छन्।
परम्परागत जापानी ग्रामीण गाउँहरु को कुरा, Gifu प्रान्त को Shirakawago पर्यटकहरु मा प्रसिद्ध छ। यद्यपि क्योटोमा मियामासँग पनि एक सुन्दर जापानी ग्रामीण परिदृश्य छ। यदि तपाईं यस गाउँको वरिपरि टहलनुभयो भने, तपाईं पुरानो जापानी परिदृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं यो परम्परागत घरमा बस्न सक्नुहुन्छ।
चार asonsतुहरूको परिवर्तन अनुसार यस गाउँको दृश्यहरू राम्ररी परिवर्तन हुन्छन्। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया माथिको भिडियोमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
मियामामा, कृपया सान-इन लाइनमा जेआर क्योटो स्टेशनबाट हाययोशी स्टेशनमा जानुहोस्। यो क्योटो स्टेशनबाट हाययोशी स्टेशन सम्म 60० मिनेट जति छ। अर्को, यो लगभग minutes० मिनेटको बसबाट हियोशी स्टेशनबाट मियामासम्म जान्छ।
यदि तपाईंले क्योटो स्टेशनबाट एक सीधा बस लिनुभयो भने, यसले करीव १०० मिनेट लिन्छ।
फोटोहरू: अर्को क्योटो, मियामा - परम्परागत ग्रामीण परिदृश्यको आनन्द लिनुहोस्
मियामा क्योटो प्रान्तको मध्य भागमा अवस्थित सुन्दर ग्रामीण गाउँ हो। त्यहाँ लगभग २ 250० जापानी शैलीका घरहरू छन्। पाहुनाहरू शान्त दृश्यले भरिएका छन्। क्योटो स्टेशन देखि मियामा सम्म सीधा बस द्वारा १०० मिनेट छ। कियोटो प्रान्तमा मियामाको सामग्री सामग्रीहरू मियामाको फोटोहरू ...
क्योटोको प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण "अन नो फनाया"। यो परम्परागत भवन, क्योटो प्रान्त, जापान = शटरस्टकको संरक्षण जिल्लामा नियुक्त गरिएको छ।
Ine क्योटो प्रान्तको उत्तरी भागमा जापानको समुद्री किनारमा माछा मार्ने गाउँ हो। यस माछा मार्ने गाउँमा माछावालाहरूका घरहरूसँग पहिलो तलामा माछा मार्ने डु boat्गा गेराज छ, जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। यी भवनहरू जस्तै तिनीहरू समुद्रमा तैरिरहेका छन् "फनाया (जहाजको घर)"।
फनाया जापानी परम्परागत मछुवा घर हो। किनभने ईनेमा मसँग यी घरहरू धेरै छन्, यसलाई "समुद्र क्योटो" भनिन्छ। किनकि समुद्र घरमुनि छ, यसलाई "जापानको समुद्र नजिकको शहर" पनि भनिन्छ। यस गाउँमा हरेक वर्ष करीव ,300,000००,००० पर्यटकहरू आउँछन्।
यदि तपाईं Ine मा जानुहुन्छ, तपाईं Funaya मा जीवन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं डु on्गामा चढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जापानको सागरमा धेरै स्वादिष्ट माछा खान सक्नुहुन्छ। र तपाईं फनाया मा रहन सक्नुहुन्छ। Ine मा "अर्को क्योटो" कुनै शंका छैन।
>> Ine को विवरणको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
अकिता प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
Gifu प्रान्त: सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
Iwate प्रान्त! सर्वश्रेष्ठ आकर्षण र फूड्स, विशेषताहरू
फुकुशिमा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
हिरोशिमा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
यामागुची प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
ईशिकावा प्रान्त: उत्तम आकर्षणहरू र गर्नु पर्ने कुराहरु